Samsung Gear S3 nwere ihu ọhụụ ọhụụ 3 ọhụụ | Gam akporosis
Samsung Gear S3 nwere ihu ọhụụ ọhụụ 3 ọhụụ
Elvis bucatariu | | Samsung, smartwatch
Samsung Gear S3 eweputala ihu elekere atọ "kachasị arụ ọrụ" nke ahụ ga-eme ka ndị ọrụ nwee ọtụtụ ọrụ ozugbo na isi ihuenyo nke nlele anya ha.
Iji iwebata elekere ọhụụ ndị a, makwaara dị ka lelee ihu ma obu ihu elekere, ụlọ ọrụ ahụ esorola ndị a ma ama atọ, onye njem njem Bear Grylls, onye na-ese foto Russia bụ Murad Osmann na onye ọkwọ ụgbọ ala Robert Maddison.
1 Samsung N'ihu Ngosi
2 Samsung ihu ihu
3 Samsung Ihu Egwuregwu
Samsung N'ihu Ngosi
Ihe ngosi ohuru ohuru Samsung n’èzí na-egosi altimita n’akuku aka nri na barometer na aka ekpe. Na mgbakwunye, na akụkụ ala ị ga-enwe ụbọchị na akara ngosi oge, ebe ị nọ na arc dị elu ị nwere ike ịhụ oge ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ ọdịda anyanwụ.
Anya elekere a nwekwara ọnọdụ abalị pụrụ iche na mgbakwunye na ọtụtụ agba ịhọrọ. N'okpuru ị nwere ike ịhụ Bear Grylls na-agba egwuregwu Gear S3 na akụkụ a na ihuenyo mbụ.
Samsung ihu ihu
Maka ndị na-anụ ụtọ njem, Samsung Travel Watchface bụ nhọrọ kachasị mma, ebe ọ nwere ike igosipụta oge na ọnọdụ okpomọkụ nke ebe abụọ n'otu oge, yana ịweta ngwa ngwa mgbanwe ọnụego.
Iche nche a ga-egosikwa gị ebe dị anya site na njirisi njem m, yana map zuru ezu banyere ọnọdụ gị ugbu a.
Iji gosi uru nke ihu elekere a, Samsung esorola onye na-ese foto na onye njem Murad Osmann soro nwunye ya Natalia (nke amara maka usoro Soro M ma ọ bụ Soro M).
Samsung Ihu Egwuregwu
A na-eche ihu elekere a maka ndị egwuregwu na ndị na-emega ahụ. N’akụkụ aka nri nke ọkpụkpọ ahụ ọ nwere ngụ oge, ebe aka ekpe ya na-egosi spidomita. N'aka nke ọzọ, ọ na-egosipụtakwa obi obi na ọnụọgụ calorie ọkụ.
N'ikpeazụ, ị ga-enwe ike ịnweta maapụ ụzọ gị site na ihe ngosi njem m yana igodo mkpirisi abụọ ị ga-enwe ike ịnweta ntọala ihu Watch.
N'okpuru ị ga - ahụ ọrụ nke Samsung Sports Watchface na vidiyo na - esote emere na mmekorita ya na onye ọgba tum tum moto Robbie Maddison.
Nwere ike budata ihe ngosi ọhụụ maka Gear S3 ugbu a site na Gear App Store platform.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ihe ụfọdụ n'ime ihe kacha mma na-eche ihu maka gam akporo Wear, egbula oge pịa njikọ gara aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Samsung Gear S3 nwere ihu ọhụụ ọhụụ 3 ọhụụ
Nyocha Ulefone Armor, ihe niile na-erughị € 150
HTC U Ocean: Foto izizi na nkọwapụta teknụzụ